Otu esi etinye Skype na Debian 11 - LinuxCapable
August 31, 2021 by Jọshụa James
Bubata igodo GPG na ebe nchekwa Skype
Skype bụ ngwa ewu ewu ọkachamara n'inye nkata vidiyo na oku olu n'etiti kọmputa, mbadamba na ngwaọrụ mkpanaka. Skype na-akwadokwa ụfọdụ ntụzịaka egwuregwu dị ka Xbox One, Xbox Series X/S consoles, smartwatches, na ọbụna Alexa. Akụkụ ọzọ nke Skype bụ onye ndu na ọtụtụ afọ bụ ozi ngwa ngwa na nkesa faịlụ. Ngwanrọ a bụ nke Microsoft, ma ọ bụ n'efu, ọ chọghịkwa ikikere.
Ntuziaka anyị ga-egosi gị otu esi etinye Skype maka ikpo okwu Linux Debian 11, Bullseye.
Iji wụnye Skype na sistemụ Debian gị, ị ga-achọ ijide n'aka na etinyere ngwugwu ndị a. Gbaa iwu a ka ị nyochaa ma ọ bụ wụnye ngwugwu:
Nkuzi ga-eji ihe ngwugwu curl ibudata igodo GPG; mbụ, chọpụta ma ọ bụrụ na ngwugwu dị:
Nke mbụ, ị ga-ebubata igodo Skype GPG iji chọpụta izi ezi ngwugwu nrụnye:
Na nwụnye zuru ezu, ị nwere ike na-agba ọsọ Skype n'ụzọ ole na ole dị iche iche. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ Debian gị, ị nwere ike iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ iwu skype n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> Skype. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ Ị mepee Skype, ị ga-ahụ windo ndị a:
Ekele, ị tinyela Skype maka Linux na Debian 11 Bullseye.
Iji melite Skype, enwere ike ime nke a n'otu ụzọ ahụ ị ga-esi lelee ma melite sistemụ gị site na iji iwu mmelite dabara adaba:
Ọ bụrụ na mmelite ọ bụla dị, ị nwere ike ịga n'ihu imelite ya site na iji sudo apt kwalite, nke blanket na-ahazi mmelite sistemụ niile, ma ọ bụ ị nwere ike imelite skype n'otu n'otu site na iji iwu njedebe a:
Nke a ga-akwalite ngwugwu Skype na-enweghị imelite ihe ọ bụla ọzọ.
Iji wepu sọftụwia Skype na sistemụ Debian gị, gbanye iwu a na ọdụ gị:
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi etinye Skype na Debian 11. N'ozuzu, Skype na-enye gị ohere ịme ma vidiyo na oku olu na kọntaktị nkeonwe na azụmahịa gị. Maka ndị ọrụ nke Rocky Linux na-elekwasị anya n'akụkụ ụlọ ọrụ, Skype nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara uru n'etiti ọtụtụ maka mkparịta ụka n'etiti otu.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Skype Mail igodo